कयौं दुश्मन बनाएका सलमान खानको ७ मिल्ने साथी को को हुन् ? – Khabaarpati
January 9, 2021 January 9, 2021 goodmamLeaveaComment on कयौं दुश्मन बनाएका सलमान खानको ७ मिल्ने साथी को को हुन् ?
मुम्बई(एजेन्सी) । बलिउड अभिनेता सलमान खानलाई बलिउडको ‘यारों के यार’ पनि भनिन्छ । बलिउडमा एउटा भनाई नै छ, यदि तपाईं सलमानको मिल्ने साथी हो भने तपाईंलाई कसैले छुनै सक्दैनन् । यो सत्य पनि हो कि सलमानले आफ्नो साथीलाई सहारा दिनका लागि हदैसम्मको सीमा पार गरेका छन् । यहाँ सलमानका ती ७ साथीको चर्चा गरिएको छ, जो सलमानको करियर शुरु भएदेखिकै मिल्ने साथी बने ।सायदै त कमैलाई मात्र थाहा होला कि आमिर खान र सलमान खान एउटै घरका दाजुभाई जस्तो सम्बन्ध राख्दछन् ।
उनीहरुले फिल्म ‘अन्दाज अपना–अपना’मा पनि सँगै काम गरेका थिए । जसमा उनीहरुको केमेष्ट्री सानदार थियो । आज यो फिल्मलाई कल्ट क्लासिकको दर्जा दिइएको छ ।अजय देवगन र सलमान खान एकअर्कालाई बाल्यकालदेखि नै जान्दछन् । उनीहरुको दोस्ती यति बढी छ कि अजयको करण जोहारसँग झगडा हुँदा सलमानले करणको फिल्म ‘केसरी’ निर्माणबाट अलग्गिने निर्णय लिएका थिए । किनकी अजय पनि सारागढीको लडाईमा नै आधारित रहेर फिल्म बनाउने योजनामा थिए ।सलमान खान र अक्षय कुमारले आफ्नो साथीत्व सम्बन्धलाई कहिल्यै मिडियासमक्ष ल्याउन चाहेनन् । उनीहरु एकअर्काका लागि जे पनि गर्न सक्छन् ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
अभिनेता ज्याकी श्राफ बलिउडमा जोकोहीको पनि साथी हुन् । तर सलमानसँगको उनको सम्बन्ध विशेष छ । जब दुवै एक पार्टीमा हुन्छन्, तब सारा मानिसहरु उनीहरुलाई नै हेर्छन् ।९० दशकको सबैभन्दा ठूला स्टार मिथुन चक्रवर्ती पनि सलमानलाई धेरै रुचाउछन् । सलमान जब–जब आफ्नो फिल्मको प्रमोसन गर्नका लागि डान्स इण्डिया डान्सको सेटमा पुग्छन्, तब दुवै मिलेर यस्ता यस्ता किस्सा सुनाउछन्, जुन किस्सा सुनेर दर्शकहरु पेट मिची मिची हास्छन् ।सलमान खान र सन्जय दत्तलाई बलिउडको वास्तविक ब्याड ब्वाई भनिन्छ ।
यो जोडीको दोस्ती सन् ९० को दशकबाट शुरु भएको हो र आज पनि जारी छ । केही समय अघि उनीहरुको सम्बन्धमा दरार आएको बताए पनि सन्जयको जन्मदिनमा सलमानले शुभकामना दिएपछि त्यो चर्चा गलत साबित भएको थियो ।सलमान खान र शाहरुख खानबीच भएको गलत प्रचार केही समय अघि सकिएको थियो । अब पुनः यो जोडी एक मिल्ने साथी भएका छन् । हालैमात्र यी दुईले एकअर्काको फिल्ममा केमियो गरेका थिए ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
उमेशको श’व पुरै सु’न्निएको, देव्रे हातमा धा’रिलो ह’तियार प्र’हार गरे जसरी छि’याछि’या पारिएको थियो